Fikarohana momba ny firaisana 1: ET, UFO, Reincarnation, God, embryology ary modely ho an'ny fiainana, miaraka amin'ny fanehoan-kevitra momba ny fandaharana "Tsy fantatra" sy "Vahiny Vahiny" - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Miaraka amin'ny fidiran'ny Fanahy maha-Ahtun Re na dia i Tran Medium aza, Kevin Ryerson
Ao amin'ny fandaharana "Tsy fantatra", i Luis Elisondo sy i Christopher Mellon dia nanamora ny fanamafisana ny horonantsary UFO an'ny tafika amerikana.
Ny fahalianako amin'ny ET sy UFO dia nateraky ny fanamarinan'ny tafika amerikana ireo horonantsary telo an'ny UFO nalain'ny mpanamory fiaramanidina mpiady avy any US Nimitz sy US Theodore Roosevelt. Ny sary eo ambony dia ny "Tic Tac" UFO nalain'ny mpanamory fiaramanidina mpiady avy any USS Nimitz tamin'ny 2004 teo amoron'ny morontsirak'i Mexico atsimon'i San Diego.
Ny teny hoe "Tic Tac" dia noforonin'i David Fravor mpanamory fiaramanidina izay nisakana ity UFO ity ary nanatri-maso manuver mahatalanjona nataon'ity asa tanana ity izay mihoatra ny fahafahan'ny fiaramanidina naorin'olombelona. Nilaza i Fravor fa tokony ho 40 metatra ny halavany, fotsy sy lava ny UFO, mitovy amin'ny mint goavambe Tic Tac goavambe. Tsy nisy elatra na fiasa hafa an'ny fiaramanidina mahazatra.
Raha hijery resadresaka ifanaovana amin'i David Fravor miaraka amin'ny sary an'ny Tic Tac UFO dia mankanesa any:
Ny komandà David Fravor dia mamaritra ny fihaonany tamin'ny 2004 Nimitz Tic-Tac UFO miaraka amin'ny horonan-tsary
Ny sary eo ankavanana sy ny sary etsy ambany dia misy UFO roa nalaina an-tsary tamin'ny alàlan'ny mpanamory fiaramanidina avy any USS Theodore Roosevelt nandritra ny fotoana nitondrana ny morontsiraka atsinanana amerikana teo anelanelan'ny Washington, DC sy Jacksonville, Florida. Ny UFO "Gimbal" dia voasambotra rehefa nanidina tamin'ny hafainganam-pandeha avo lenta, mampahatsiahy gimal mifatotra amin'ny fanambanan'ny fiaramanidina izay afaka mihodina mitazona radara na trakta video amin'ny zavatra iray rehefa mihodina ny fiaramanidina.
Ilay UFO "Mandehana Haingana" dia tratra tamin'ny horonan-tsary nanakodia ny fanambonin'ny ranomasina tamin'ny hafainganam-pandeha avo dia haingana.
Pilot Ryan Graves dia miresaka momba ny Gimbal sy ny horonantsary Go Fast nalain'ny mpanamory fiaramanidina avy amin'ny USS Theodore Roosevelt
Raha hijery sarimihetsika misy ny UFO telo voalaza rehetra dia mankanesa any:
azafady mankany amin'ny:
Lahatsary UFO an'ny tafika amerikana dia noheverina ho tena izy avy amin'ny tafika an-dranomasina amerikana
Luis Elizondo, Tom Delonge ary Christopher Mellon, mpitarika ny fanambarana porofo momba ny UFO sy ny kintan'ny fahitalavitra "Tsy fantatra"
Tarehimarika roa izay nanampy tamin'ny famoahana ireo horonantsary ireo dia Luis Elizondo, tompon'andraikitra misahana ny tafika amerikana misotro ronono ary Christopher Mellon, sekretera lefitra mpanampy lefitra misahana ny faharanitan-tsaina taloha. Ankoatr'izay, mpitendry mozika Tom Delonge an'ny vondrona rock Blink 182 dia efa mpitarika tamin'ny famoahana ny mombamomba ny governemanta UFO ihany koa.
Misaotra an'ireto olona ireto aho tamin'ny asany sy ny fandraisany anjara tamin'ny fahitalavitra: Tsy fantatra: Ao anatin'ny fanadihadiana ny UFO any Amerika
Manantena aho fa afaka miara-miasa isika amin'ny ho avy.
Ireo karazana ET izay hita ao amin'ireto sary ireto dia horesahina ao amin'ny lahatsoratra faharoa momba ny ET sy UFO.
Modely angovo mamorona fiainana sy endrika ara-batana
Fony biolojika lehibe tao amin'ny Oniversiten'i Illinois aho dia agnostika taloha-tsy fantatro raha nisy Andriamanitra na tsia. Niova ny raharaha rehefa nisondrotra ambaratonga ambony aho embryology Mazava ho azy, izay nianarako ny fomba nanambanan'ny tsirinaina sy atody iray, avy eo dia namorona olombelona.
Gaga aho fa nihetsiketsika ny firafitry ny sela velona, ​​niforona avy tamin'ny atody sy tsirinaina tany am-boalohany, mba hamorona rafitra sarotra toy ny tadin'ny hazon-damosina sy ny ati-doha.
Amin'ny sary omena etsy ambany sy ankavanana, ny embryon dia naka endrika fisoratan-onja miaraka amin'ny fantsona maintso eo an-tampony miaraka amina faritra misy ny vatan-tsofina maneho ny ati-doha sy ny tadin'ny hazon-damosina, ny fantsom-by Violet dia mamorona eo ambaniny ilay lalan-dra mandevon-kanina sy ny C ny rafitra eo amin'ny faran'ny sary dia ireo havokavoka mivoatra.
Fantatro ny fanandramana izay namboarina tao anaty tanky na sambo ny toe-piainan'ny Tany primordaire, izay namboarina ho azy ny vatom-pananganana, toy ny asidra amine. Ao amin'ny vatan'olombelona, ​​ny asidra amine dia mitambatra hamorona proteinina.
Ny famoronana asidra amine ao anatin'ny toetoetran'ny laboratoara dia tsy manazava ny fomba fivezivezin'ny sela ao amin'ny embryon mba hamorona taova sarotra.
Ny fomba tokana azoko an-tsaina ny fomba nisehoan'ity dihy majika ity dia ny fisian'ny hery tsy hita maso, modely angovo, izay nitarika ny famoronana taova sarotra.
Tamin'ity fotoana ity no nanapahako hevitra fa tsy maintsy misy zavatra toa an'Andriamanitra, faharanitan-tsaina mitarika, misy. Ity faharanitan-tsaina ity dia tsy maintsy namorona modely angovo izay volavolain'ireo sela biolojika.
Famaritana ara-batana amin'ny tranga vatana vaovao
Izahay dia mahita modely angovo izay tafiditra amin'ny famoronana ny fisehoantsika ara-batana manomboka amin'ny androm-piainana iray hafa. Ny tranga fitadidiana ny fiainana taloha dia efa nohamarinin'i Ian Stevenson, MD ao amin'ny Oniversiten'i Virginia, dia naneho fitoviana amin'ny endrika tokan-tarehy amin'ny androm-piainany iray hafa.
Ny fitoviana ara-batana amin'ny tranga teraka ao amin'ny vatana vaovao dia voarakitra an-tsoratra rehefa misy zaza manana antsipirian'ny fahatsiarovan-tena taloha momba ny fiainana taloha izay misy ny fianakaviana taloha. Ny fianakavian'ny fiainana taloha dia nanamarina ny fanambarana nataon'ilay zaza momba ny anaran'ny olona taloha ary ny zava-misy izay ho fantatry ny mpikambana ao amin'ny fianana taloha. Matetika, ny fiainana taloha dia manaiky ny zaza ho teraka ao amin'ny vatana vaovao indray amin'ny olon-tiany maty.
Raha misy ny sarin'ny fiainam-piainan'ny zaza taloha ary ny zaza dia afaka arahana mandritra ny 20 taona ka hatramin'ny olon-dehibe, Ian Stevenson dia nanamarika fa rehefa olon-dehibe dia mety hitovy amin'ny persona taloha ny zaza.
Ny mpikaroka sasany dia nahita an'io tranga io ihany. Tranga lehibe ao amin'ny bokiko ateraka indray, izay mampiseho ny fitoviana ara-batana amin'ny androm-piainany iray hafa, dia omena etsy ambany:
Hanan Monsour | Tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao Suzanne Ghanem
Rashid Kaddege | Tranga Reincarnation an'i Daniel Jurdi
James Huston, Jr | Tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao James Leininger
Sary Ghost dia manohana fa misy modely angovo mitaona ny fisehoana ara-batana
Ny fanohanana modely angovo izay mifanaraka amin'ny endrika ara-batana dia omena ihany koa andiana sarina vatana fanahy miakatra avy amin'ny zatovo iray izay maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana iray, izay ahitan'ny vatana fanahy ny endrik'ilay zatovo. Raha te hahalala bebe kokoa dia mankanesa any:
Ahtun Re, Fanahy iray nampitaina tamin'ny alàlan'i Kevin Ryerson, dia manana fahalalana momba ny ET sy UFO
Niara-niasa aho medium medium Kevin Ryerson hatramin'ny 2001, isaky ny volana. Hitako fa i Kevin dia nandefa fanahy iray antsoina hoe Ahtun Re, izay naneho ny fahaizany manao lalao taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta.
Ahtun Re no manan-tsaina sy manam-pahalalana indrindra nifaneraserako tamin'ny fiainako manontolo. Ny bokiko, Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana, dia mandrafitra ny resadresaka nifanaovako tamin'i Ahtun Re momba ireo fanontaniana lehibe eo amin'ny fiainana, toy ny hoe impiry isika no miverina amin'ny vatana vaovao ary rahoviana no mifarana ny fahatongavany nofo teto amin'ny planeta Tany.
Ahtun Re dia nilaza fa manana fahalalana be momba ny sivilizasiona ivelan'ny tany ary ity no voalohany amin'ireo andiana lahatsoratra izay hanoratako amin'ny ETs sy UFO, mifototra amin'ny resadresaka nifanaovako tamin'i Ahtun Re.
Mamorona fiainana ny programa momba ny fahiratan-tsain'Andriamanitra
Manaiky i Ahtun Re fa ny fizotry ny embryolojika dia fehezin'ny maodelin'ny angovo izay azo raisina ho fandaharan-tsaina momba ny artifisialy noforonina mba hamoronana fiainana. Misy ny programa momba ny faharanitan-tsaina ho an'ny karazan-karazany rehetra eto an-tany, anisan'izany ny vorona, biby mandady, trondro sy ny sisa.
Ny programa angovo momba ny angovo artifisialy dia tafiditra ihany koa amin'ny famolavolana molekiola sarotra, toy ny chlorophyll, izay molekiola tompon'andraikitra amin'ny fiainana zavamaniry sy ho an'ny famokarana oksizena eto amin'ny planeta Tany. Raha tsy nisy ny klôlofôla dia tsy nisy isika.
Ny lafiny maha-lahy sy vavy an'Andriamanitra
Ahtun Re dia nanambara fa Andriamanitra dia azo jerena amin'ny fananana endrika lahy sy vavy. Ny endrika vehivavy dia miditra an-tsehatra amin'ny fiainan'ny olombelona noho ny fitiavana, toy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty.
Ny lafiny maha-lahy an'Andriamanitra dia ny angovo izay manome hery ny fiainana sy ny fandaharan-tsaina momba ny artifisialy mamorona fiainana. Ny lafiny maha-lahy an'Andriamanitra dia misy prana, izay teny ilazana ny angovo fiainana ao amin'ny fivavahana hindoa. Velona daholo isika satria manana ny herin'Andriamanitra, prana, mivezivezy eo amintsika.
Manana fanahy ny olona
Ny zavamananaina rehetra dia manana prana. Ny zavamananaina teraka indray ao amin'ny vatana vaovao dia manana rafitra antsointsika hoe "fanahy", izay fitaovam-pitahirizana mavitrika izay misy fahatsiarovana ny fiainantsika taloha, ary koa ny ADN ara-panahy.
Tao anatin'ny dingan'ny namoronana ny fanahintsika dia nanana fahaizana manokana sy talenta manokana isika. Araka izany, ny mpahay siansa dia mazàna miverina teraka indray amin'ny maha-mpahay siansa antsika, ny olona teatra dia teraka indray ao amin'ny maha-mpilalao sarimihetsika, mpanakanto sary an-tsary azy ireo ho toy ny mpanao sary sokitra, hosodoko sy ny sisa. Ireo olana ireo dia resahina amin'ny antsipiriany ao Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny vatana vaovao. Ny fanahintsika dia manome fitohizana mandritra ny fahatongavantsika ho nofo.
Ny ankamaroan'ny biby dia tsy manana fanahy, na dia manana prana aza, toy ny zava-manan'aina rehetra. Mifanohitra amin'izany, ny biby fiompy izay manana fifandraisana akaiky amin'ny olombelona dia afaka mampivelatra fanahy mifototra amin'ny fatorana ara-pientanam-po. Ny olona dia afaka miverina amin'ny vatana vaovao amin'ny biby fiompy tiany tamin'ny fiainana taloha.
Fandrefesana ny fivoaran'ny teknolojia an'ny ETs
Amin'ny fametrahana fepetra ho an'ny fandrosoana ara-teknolojia, Ahtun Re dia nanolo-kevitra ny hampiasantsika ny fampiasana voalohany ny Artimental Intelligence (AI) amin'ny milina vita amin'ny karazana iray. Ny famaritana ny milina AI dia fitaovana iray izay mandray vaovao avy amin'ny tontolo iainana, manadihady ny vaovao ary avy eo dia mandray fanapahan-kevitra arakaraka ny angon-drakitra momba ny tontolo iainana, tsy misy idiran'ny olombelona.
Ohatra iray mahazatra indrindra amin'ny milina AI dia ny Tesla na fiara hafa manana endrika mitondra fiara mitokana. Ireo fiara ireo dia manana sensor manerana ny fiara, ary koa fampidirana GPS, ary ny solosaina ao anaty fiara dia mampiasa an'ity data ity mba hampiasana ny rafitra ao anaty fiara, toy ny freins mba hisorohana ny fifandonana, raha tsy mandray anjara amin'ny mpamily olombelona. Amin'ny fanombanana ny fandrosoan'ny teknolojia sivilizasiôna ET, hampiasa ny fahatongavan'ireo milina AI ho fatra.
Azafady mba diniho ihany fa nahavita sidina voalohany tany Etazonia izahay tamin'ny alàlan'ny Wright Brothers tamin'ny 1903 ary avy eo tonga tany amin'ny volana izahay lehilahy 66 taona taty aoriana, tamin'ny 1969. Diniho ihany koa ny fampandrosoana haingana ny Internet sy ny solosaina. Raha vantany vao vita ny fandrosoana ara-teknolojia lehibe dia afaka mitombo haingana izy ireo ao anatin'ny fotoana fohy.
Ireo ET ET dia nanao 400,000 XNUMX taona farafahakeliny eo alohantsika eo amin'ny lafiny teknolojia- Zava-misy ny “Vahiny Vahiny”
Amin'izany ao an-tsaina, Ahtun Re dia nanambara fa ny sivilizasiôna ET rehetra izay mitsidika ny tany dia namorona milina AI farafaharatsiny 400,000 taona lasa izay. ETs, amin'ny teny hafa, dia namorona ny mitovy amin'ny Tesla izay taloha ela be.
Amin'ny ankapobeny, nilaza i Ahtun Re fa ny fahaizana mamorona ny teknolojia "hiondrika toerana" hivezivezena lavitra dia mitranga 200 taona eo ho eo taorian'ny namoronana ny milina AI. Araka izany, ao anatin'ny 200 taona na mihoatra dia hanana teknolojia hivezivezy manerana an'izao rehetra izao isika.
Ny ET dia nanana ny haitao hiondranana toerana hivezivezena lavitra mandritra ny 400,000 taona farafahakeliny ary nitsidika anay izy ireo nandritra izany fotoana izany.
Araka izany, ny seho ananan'ny seho toy ny Vahiny taloha manan-kery. Ny antsipirian'ny fitsangatsanganana ET ho an'ny sivilizasiôna taloha eto amin'ity seho ity dia matetika be vinavina be, saingy marina ny lohahevitra fototra.
ETs dia manana fanahy, teraka ao amin'ny vatana vaovao ary manana programa momba ny fahiratan-tsaina toy ny eto an-tany, noforonin-dRay teraka tao amin'ny vatana vaovao ho siansa.
Ny extraterrestrials dia nivoatra niaraka tamin'ny tsipika fampiroboroboana ny karazany toy ny eto an-tany, izay misy bibikely, biby mandady ary biby mampinono. Na eo aza ny fahasamihafan'ny karazan-karazany mahaforona vatan'ny ET, ny ET an'ny spacefaring dia samy manana vatana tahaka ny olombelona satria manan-doha sy sandry roa hanodinkodinana zavatra sy tongotra roa hivezivezy.
Ahtun Re dia nilaza fa ity no endrika ara-batana mahomby indrindra ho an'ny olona manan-tsaina mandroso. Na izany aza, misy ny tsy fitoviana mifototra amin'ireo karazana biby ET izay nivoatra avy.
Ny ETs an'ny biby mandady amin'ny habakabaka dia hanana sandry roa sy tongotra roa, na dia hitovy kely amin'ny an'ny alligator aza ny loha.
Ny ET izay nalaina avy tamin'ny tsipika bibikely dia hanana sandry roa sy tongotra roa, fa ireo appendage ireo dia mety misy tonon-taolana marobe ary mety misy exoskeleton. Ho fanampin'izany, ny lohan'ny zavaboary iray izay avy amin'ny tsipika bibikely dia mety manana loha izay mitovy amin'ny an'ny mantis mivavaka.
Ajanony ary eritrereto ny mety ho fihetsikao manoloana ny humanoid, mitovy habe amin'ny tananao roa sy tongotra roa, fa ny lohanao kosa dia toy ny mantis mivavaka, fantatrao fa 400,000 taona mandroso kokoa noho ny anao ny teknolojia!
Izany dia mety hitsoka ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​satria isika olombelona dia efa zatra karazan-jaza lehibe indrindra eto ambonin'ny tany. Ny fihaonana amin'ireo olona nandroso lavitra noho isika dia hanetry tena sy hampatahotra.
Ny fahaizan'ny olombelona amin'ny herisetra amin'ny herisetra mifandraika amin'ny Advanced ET Civilisations
Izahay ara-tantara dia karazana mahery setra. Matetika isika dia mandeha amin'ny ady mifototra amin'ny fahasamihafana eo amin'ny zom-pirenena, ny fivavahana ary ny firazanana. Mitohy anio izany, izay iadian'ny sekta isan-karazany amin'ny finoana Silamo, Sunnis ary Shiites, ary mifofofofo ao anaty fifanoherana ny Moske tsirairay avy.
Mandeha miady amin'ny tenantsika isika, izay foto-kevitra tsy miova amin'ny tantarantsika. Ny ET spacefaring dia mahatakatra izany ary manantena fa ny firenena eto an-tany dia mety hamaly ny fifandraisan'ny ET amin'ny ady.
Tsy noho ny ET dia fankahalana, fa satria samy hafa be izy ireo noho ny fisehoantsika ara-batana sy ny fandrosoana ara-teknolojia, dia azo jerena ho mandrahona antsika izy ireo.
Ny olombelona sy ny ET dia mpirahalahy sy mpirahavavy amin'ny fahitana an'Andriamanitra
Ny programa angovo momba ny angovo artifiry namboarin'Andriamanitra dia ampiasaina amin'ny fampandrosoana embryonic an'ny ETs, tahaka ny fampiharana azy amin'ny fampandrosoana ny endrika fiainana eto ambonin'ny tany. Azontsika atao ny mino fa ny prana manome antsika fiainana dia ilay prana manome fiainana ET ihany. Mpirahalahy isika maneho ny herin'Andriamanitra amin'ny heriny.
Ny ET Spacefaring dia manana fanahy ihany koa ary mivoatra ara-panahy amin'ny alàlan'ny dingan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray, toy ny olombelona ihany izy ireo. Ahtun Re dia nanondro fa ho an'ny ET, ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao dia nanjary siansa.
Ho an'ny ETs, ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao sy ny drafitra mandritra ny androm-piainana dia fandalinana kambana momba ny siansa-Ian Stevenson
Fantatsika amin'ny fandalinana ireo ankizy manana fahatsiarovana fiainana taloha, fa ny fanahy dia mikasa mandritra ny androm-piainana mba hiaraka amin'ireo izay tiantsika, fantatsika ary niara-niasa tamina nofo taloha.
Ity dia naseho tamin'ny fomba mazava tsara tamin'ny Ian Stevenson ny Fianarana Ankizy, izay misy kambana 31 kambana nanana fahatsiarovan-tena taloha tamin'ny fahazazana izay nohamarinina tamim-pahamarinana. Hitan'i Stevenson fa tamin'ny 100 isan-jaton'ireo tranga ireo dia nisy fifandraisana lehibe teo amin'ny fiainany talohan'izy ireo.
Ny fifandraisana mahazatra taloha dia ny an'ny mpiray tampo, fa ny kambana tamin'ny fahatongavany ho nofo taloha dia mety ho vady na namana akaiky koa. Ny fandinihana Twin dia mampiseho mazava tsara fa ny fanahy dia tsy vitan'ny hoe afaka manomana mandritra ny androm-piainany fotsiny, fa ny fanahy kosa dia mety hanan-kery amin'ny fizotry ny fitondrana vohoka ka hatramin'ny fanahy roa dia afaka manamboatra ny teraka ao amin'ny vatana vaovao ho kambana.
Isika eto amin'ny planeta Tany dia tsy mahatsapa ny fizotran'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, afa-tsy ireo izay mahalala ny fikarohana an'i Ian Stevenson, MD tao amin'ny University of Virginia.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny fahalalan'ny ET ny fizotran'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray dia mandroso tokoa ka manomana mandritra ny androm-piainana amin'ny finiavana lehibe izy ireo, ka teraka teo amin'ilay toerana sy ireo olona ilainy hifaneraserana amin'ny fanatanterahana tetikasa manokana.
Raha ny tena izy, Tim Draper kapitalista mpiambina dia nizara tamiko ny finoany fa manomana ny fahatongavantsika ho nofo isika. Ny orinasan'i Tim dia nanampy tamin'ny famatsiam-bola ny tetikasan'i Elon Musk an'ny Tesla sy SpaceX. Tamin'ny lasa taloha, i Musk dia i Thomas Edison ary i Tim, tamin'izany vanim-potoana izany, dia mpamatsy vola an'i Edison koa.
Ny faritra sy ny tany Goldilock ho Disneyland ho an'ny ETs-Fiahiahy momba ny fanamaintanana eran-tany sy ny hetsika fandroahana faobe
Ahtun Re dia nanondro fa misy karazana ET tokony ho am-polony mitsidika ny tany. Ny antony voalohany amin'ny fitsidihan'izy ireo dia satria vitsy ny planeta afaka manohana ny fahasamihafan'ny fiainana biolojika izay omen'ny Tany.
Ny tany dia ao amin'ny faritra "Goldilocks" ao amin'ny rafi-masoandro misy antsika, izay lavitra lavitra ny kintantsika, ny Masoandro, mba hisorohana ny famongorana amin'ny hafanana, fa ny akaikin'ny Masoandro kosa mba manana hafanana sy rivo-piainana mitondra fiainana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny Tany dia eo amin'ny toerana izay mety amin'ny fiainana.
Ny ET dia mahafantatra tsara ny satanay Goldilock ary ny "Voahangy Manga," antsoina hoe ET ny planetantsika, dia iray amin'ireo toerana mahaliana indrindra hitsidihan'ny ET. Ny fiainantsika feno dia mahatonga ny tany ho "Disneyland" ho an'ny ET.
Ny ET dia miahiahy ny amin'ny fahavelomantsika noho ny fiakaran'ny maripanan'ny tany, izay mety hiteraka hetsika fongana faobe. ETs dia mianatra am-pahavitrihana ny atmosfera sy ny ranomasintsika.
Hanafika ny tany ve ireo ET amin'ny “Fetin'ny fahaleovan-tena” Senario?
Nanontany aho indray mandeha Ahtun Re raha te-handresy ny planetantsika ny ETs noho ny loharano toa ny rano, oxygen ary metaly sarobidy, toy ny aseho amin'ny sary mihetsika Andron'ny fahaleovan-tena. Amin'ny sary omena ankavanana, asa-tanana ET lehibe iray manimba ny Trano Fotsy amin'ny alàlan'ny herinaratra.
Izany no fomba fiheveran'ny maro amintsika ny ET, toy ny mpandresy mahery setra izay hamono antsika raha tsy hamono azy ireo aloha isika. Ny ET dia mahatakatra ny fomba fijerintsika hoe iza izy ireo ary fantatr'izy ireo fa mila fotoana fohy ny zanak'olombelona ho vonona ny hanaiky ny fanambarana ny fifandraisan'ny ET amin'ny olombelona.
Ho an'ny ET, izahay dia primitive sy mahery setra
Namaly i Ahtun Re fa ny tolo-kevitry ny ET hanafika ny tany hahazoana loharano dia maniry ny jeneraly marinaly amerikana manafatra tafika hanafika toby tsy manan-kialofana hahazoana ny fananany.
Ny ET dia tsy mila zavatra ananantsika. Afaka mahazo izay ilainy amin'ny planeta, asteroid ary zavatra hafa any an-danitra izy ireo. Amin'ny sambo fitaterana an-tsambo dia afaka mamokatra izay ilainy izy ireo.
Fandrosoana ara-tsaina an'ny ET Spacefaring: Ny fahitana ny cosmonaut sovietika an'ny anjely goavambe toy ny olona tamin'ny 1984
Ny zavatra iray tsy maintsy takatsika dia ireo ET izay afaka mandeha amin'ny planetantsika dia lavitra lavitra noho isika tsy amin'ny teknolojia ihany fa amin'ny lafiny ara-panahy sy ara-tsaina koa. Ny endri-pifandraisana mahazatra amoung ETs dia ny telepathy.
Raha ny marina dia nahita antsika ireo ET tamin'ny voalohany, teo amin'ny tontolontsika midadasika, tamin'ny alàlan'ny fomba ara-tsaina, izay ahatongavan'ny fiainana amin'ny fiainana hafa. Ahtun Re dia nilaza fa misy "fanilo ara-tsaina", izay ifandraisan'ny zavaboary mandroso amin'ny fiainana manerana an'izao rehetra izao.
Ohatra tsara dia misy ny fahitan'ny ekipa roa nifandimby tao amin'ny laboratoara habakabaka Sovietika, Salyut 7, anjely anjely goavambe toa ny ivelan'ny sambon'ny sambon-dry zareo. Etsy ambany, mizara kaonty momba ireo tranga ireo avy amin'ny tranonkala aho UFO Insight, ao amin'ny lahatsoratra nosoratan'i Marcus Lowth.
Cosmonauts ao Salyut 7 mahita anjely goavambe toa ny zavaboary
“Tamin'ny volana jolay 1984, tao anaty fiantsonana habakabaka sovietika no nisehoan'ny iray amin'ireo fahitana hafahafa indrindra amin'ny fisehoan-javatra eo amin'ny tontolo iainana. Tsy olona tokana no nanatri-maso ny hetsika, fa olona enina kosa no nilaza fa nahita zavatra mitovy. Inona koa, ireo hetsika ireo dia nitranga tamina fotoana roa samy hafa, nanala ny mety ho iharan'izy ireo tamina fisehoan-javatra nahagaga.
Raha ny filazan'ny cosmonauts tao amin'ny Salyut 7 dia fisehoana "anjely" goavambe no teo ivelan'ny asa-tanany. Mitsingevana ambonin'ny tany izy ireo ary nilomano namakivaky ny ranomasimbe mandrakizay. Ireo elatra humanoid ireo dia nanana elatra miavaka, ary tarehy izay nisy “fanehoana milamina!” Izy ireo aza dia naminavina ny fahatsapana fandriam-pahalemana sy fitoniana teo amin'ireo mpiasan'ny ekipa.
Ny kaonty, na dia nahita fandrakofana vaovao tamin'io fotoana io aza, dia tena hita tamin'ny fomba feno kokoa tamin'ny faran'ny Ady mangatsiaka. Eny tokoa, tamin'izao tontolo izao no nahita fandresena lehibe fampielezankevitra Sovietika tamin'ny hazakazaka habakabaka dia nilalao tamim-pahanginana tany ambadika ireo hetsika ireo…
Ny tranga Salyut 7 ET
Nalefa tamin'ny aprily 1982, ny Fiantsonana an-habakabaka Salyut 7 mihidy ao amin'ny orbit an'ny Tany taoriana kelin'izay. Ny tanjona dia ny hanao fanandramana siantifika isan-karazany eny amin'ny habakabaka. Ny ekipa voalohany dia ny cosmonauts sovietika, Leonid Kizim, Vladimir Solovyov ary Oleg Atkov (izay mpitsabo aretim-po).
Telo volana ka hatramin'ny taona fahatelo niorenan'ny planeta dia nanomboka niaina fahombiazan'ny rafitra maro ny iraka. Tsy nampoizin'ireo mpiasa an-tsambo izany na dia toa tsy natahorana aza izy ireo ary niroso tamin'ny asa fitoriana.
Ny fahitana hafahafa voalohany dia nitranga tamin'ny 12 Jolay 1984. Tsy nisy na inona na inona fa "rahona volomboasary" hafahafa nefa mamiratra no toa nanarona ny gara rehetra. Tamin'ny voalohany, nino izy ireo fa tsy maintsy nisy ny fipoahana ary vokatr'izany ny famirapiratry ny volomboasary dia afo. Ny famotopotorana dia nanaporofo fa tsy izany no izy.
Ireo cosmonaut telo dia nirohotra nankeny amin'ny lavaka, saika jamba noho ny famirapiratan'ny rano niditra tao amin'ny gara. Rehefa nahitsy ny mason'izy ireo tamin'ny farany dia samy nahita "anjely" goavambe teo ivelan'ny sambo ny tsirairay avy.
Ny cosmonauts dia nanambara fa ny anjely dia manana elatra manana elatra mitovy habe amin'ny fiaramanidina 747, ary valopolo metatra ny halavany. Ny tatitra iray taty aoriana dia nanambara fa toa nanaiky ny fisian'izy ireo tao anatin'ilay garan'ny habakabaka ireo orinasa, ary nitsiky tamin'izy ireo mihitsy aza. Amin'ny fitambarany, dia nisy fito tamin'ireo zavaboary selestialy ireo.
Nijanona noho ny zavatra hitany nandritra ny folo minitra ireo lehilahy ireo. Avy eo dia nanjavona ireo "anjely", haingana sy mangina toy ny nahatongavany ihany.
Taorian'ny fiantsonan'ny Soyuz T-12 niaraka tamin'ny Salyut 7 tamin'ny 17 Jolay 1984, dimy andro taorian'ny fahitana hafahafa, cosmonauts telo hafa - Vladimir Dzhanibekov, Svetlana Savitskaya, ary Igor Volk - no niditra tao amin'ilay gara.
Tamin'ny tantara hafahafa momba ny fisehoan-javatra izay niseho, ny fandefasana ny T-12 dia nidina tany amin'ny governemanta sovietika maniry ny handresy ny fandresen'ny fampielezan-kevitra an'i Etazonia amin'ny hazakazaka habakabaka nivoatra tamin'ny 1980.
Ny fanambaràn'ny NASA tamin'ny 1983 fa hanao astronaut izy ireo, Kathryn Sullivan, ilay vehivavy voalohany nahavita spacewalk dia nanomboka zavatra. Raha nahare izany ny Sovietika dia nibanjina ny zava-bita toy izany avy hatrany. Ny toromarika dia ny hahazoana antoka fa hamita sambon-tsambo mahomby eo alohan'ny Amerikanina i Svetlana Savitskaya, ary noho izany dia izy no vehivavy voalohany teo amin'ny tantara nanao izany ary nahazo fandresena lehibe tamin'ny fampielezan-kevitra Sovietika. Raha ny tokony ho izy dia nahavita io valo andro io izy rehefa avy niantsona tamin'ny Salyut 7, ny 25 Jolay 1984.
Nandritra ny fisehoan'izany anefa dia niverina ireo anjely miafina. Tamin'ity indray mitoraka ity dia niara-nahita azy rehetra ny cosmonaut enina. Ireo zava-nitranga dia nitovy tamin'ny voalohany nisehoany.
Notaterin'izy ireo indray ireo nahita ireo hitan'ireo tompon'andraikitra ambony misahana ny asa fitoriana. Ny tatitra indray dia niresaka momba ireo zavaboary anjely manjelanjelatra hafahafa toa mahatsikaritra ireo ekipa - ary mitsiky amin'izy ireo mihitsy aza. Toy ny teo aloha, taorian'ny minitra maromaro nanodidna ny gara dia nanjavona tamim-pilaminana tao anaty habakabaka izy ireo.
Na dia tsy misy siansa sarotra farany hanohana azy mihoatra noho ny UFO mahazatra anao na ny teoria vahiny, ny tranga Salyut 7 dia natambatry ny ankamaroany ho amin'ny fampitandremana faobe. Zavatra iray ny hallucinating cosmonaut tokana. Ny fananana olona enina amin'ny toe-javatra roa samy hafa dia mizara izay fahaleovan-tena mitovy izay tsy azo inoana fa tsara indrindra.
Ny cosmonaut tsirairay avy dia niharan'ny fanadinana mafy sy maharitra tamin'ny fiverenany teto an-tany. Ireo dia natiora ara-batana sy ara-tsaina. Nandia ireo fanadinana sy fomba fiasa ireo avokoa ny rehetra. Raha fintinina dia tsy misy na inona na inona manondro na manaporofo fa ny hitan'izy ireo dia fahamasinana.
Tsy nisy koa ny sosokevitra na antony tokony hilazana fa lainga nataon'ny Sovietika io tranga io. ”
Ny anjely hitan'i Cosmonauts dia Pleiadianina mitsidika ny fanahin'izy ireo na ny vatany astral
Ahtun Re dia nilaza tamiko fa ny zavatra hitan'ny cosmonauts dia zavaboary avy amin'ny Pleiades izay nahita ny fandrosoan'ny olombelona nanao dia lavitra.
Ireo Pleiadeans ireo dia tsy teo ara-batana, fa tamin'ny fanahiny na ny vatany astral, izay niseho tamin'ireo anjely cosmonauts ho anjely.
Isika olombelona koa dia manana vatana astral na fanahy, fa mazàna tsy fantatsika ireo endrika fanahy ireo. Ny ET Spacefaring dia manam-pahaizana amin'ny fampiasana ny fanahin'izy ireo hizaha izao tontolo izao ary mandefa sambon-danitra izy ireo hanaraka ny fahitany ara-panahy.
Ahtun Re, teny an-dalana, mizara fa ireo zavaboary antsointsika hoe Pleiadeans dia tena avy amin'ny Vondron-kintana Andromeda. Namolavola planeta iray tao amin'ny antokon-kintana Pleiadean izy ireo izay nanjary fonenany vaovao, tahaka ny eritreritray ny fananganana zanatany any Mars.
Amin'ny fametrahana fepetra ho an'ny fandrosoana ara-teknolojia, Ahtun Re dia nanolo-kevitra ny hampiasa ny fampiasana voalohany ny Artimental Intelligence (AI) amin'ny milina. Ny famaritana ny milina AI dia fitaovana iray izay mandray vaovao avy amin'ny tontolo iainana, manadihady ny vaovao ary avy eo dia mandray fanapahan-kevitra arakaraka ny angon-drakitra momba ny tontolo iainana, tsy misy idiran'ny olombelona.
Azafady mba diniho ihany fa izahay olombelona dia nahavita sidina voalohany tany Etazonia tamin'ny alàlan'ny Wright Brothers tamin'ny 1903 ary nandefa lehilahy tamin'ny volana izahay 66 taona taty aoriana tamin'ny 1969. Diniho ihany koa ny fampandrosoana haingana ny Internet sy ny solosaina. Raha vantany vao vita ny fandrosoana ara-teknolojia lehibe dia afaka mitombo haingana izy ireo ao anatin'ny fotoana fohy.
Ireo ET ET dia nanao 400,00 XNUMX taona farafahakeliny eo alohantsika eo amin'ny lafiny teknolojia- Zava-misy ny “Vahiny Vahiny”
Amin'izany ao an-tsaina, Ahtun Re dia nanambara fa ny sivilizasiôna ET rehetra izay mitsidika ny tany dia namorona milina AI farafaharatsiny 400,000 taona lasa izay.
Ny ET dia nitsidika ny tany farafaharatsiny nandritra ny vanim-potoana io. Araka izany, ny seho ananan'ny seho toy ny Vahiny taloha manan-kery.
Ny olan'ny fifandraisana amin'ny ETs
Ny ET izay mitsidika dia tsy nifandray taminay be loatra satria misy ny antsoin'ny sasany hoe Prime Directive, izay misy ny fifanarahana eo amin'ireo firenena mpandeha an-habakabaka fa ny karazana izay mbola heverina ho fahagola dia tsy hosakanana, amin'ny ampahany noho ny mety hahitan'ny zavaboary voalohany ET ho Andriamanitra, ny mety hanafihan'ny olombelona fanafihana amin'ny ET , fa ny olombelona mbola entin'ny hery dia hikatsaka ny hiditra amin'ny teknolojia ET handrava ireo fahavalony eto an-tany, sns.
Ny tenako dia gaga amin'ny habetsaky ny atiny mahery setra izay heverinay ho fialamboly, toy ny nataon'ny Romanina tao amin'ny Coliseum tamin'ny fijerena olona sy biby novonoin'ny gladiatera.
Amin'ny fizahana programa misy amin'ny alàlan'ny mpamatsy fahitalavitra finday, tsy dia manelingelina ahy ny isan'ny fandaharana misy famonoana olona sy herisetra hafa.
Na dia nihena aza ny famonoana biby teny an-tsehatra, dia mbola manana adin'omby any Espana isika izay toa mankafy ny famonoana omby amin'ny sabatra matadors ny mpijery.
Na dia tsy manana mpitsangatsangana intsony aza isika izay hiadian'ny gladiatera hatramin'ny fahafatesana, any Etazonia dia manana mpitazana mampitaha azy amin'ny football amerikana isika. Na dia mitafy aroloha sy fitaovana fiarovana hafa aza ny gladiatera antsika ankehitriny, dia manintona antsika ny herisetra manenjika amin'ny baolina amerikana matihanina.
Na dia tsy novonoina teny an-kianja aza ireo mpilalao amerikanina mpilalao baolina kitra, novonoina miadana amina ratra izy ireo, anisan'izany ny ratra nahazo ny ati-doha. Ankoatr'izay, noho ny fihanaky ny ratra mafy, ny famaritana iray hafa an'ny US National Football League (NFL), dia "Not For Long", satria ny ratra dia manafoana ny asan'ny mpilalao baolina amerikana.
Tsy lazaina intsony ny ady maharitra misy any Moyen Orient. Tsy maintsy ekentsika fa karazana mahery setra isika. Soa ihany, na dia tsy nanimba ny tenantsika tamin'ny alàlan'ny fitaovam-piadiana nokleary aza isika, ny fiahiahiana an'ity fananana tombony ity dia mbola miteraka fihenjanana. Nahoana? Fa maninona isika no te-hamono tena?
Raha ET aho ary nijery ireo fandaharana tariby feno herisetra ary nanara-maso ny adinay tato anatin'ny folo taona lasa izay, dia hitandrina koa aho amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo karazana antsika.
Ny farany dia rehefa tsy miady intsony ny olombelona dia hifandray amin'ny ETs. Mila matotra amin'ny maha-fanahy antsika fotsiny isika.
Ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao dia afaka manampy amin'ny famoronana fandriam-pahalemana ary hanamorana ny fifandraisana amin'ny ETs
Ny porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao dia afaka mampandroso ny fandriam-pahalemana, satria ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, anisan'izany ny asan'i Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia, dia mampiseho fa azontsika atao ny manova ny fivavahana, ny zom-pirenena ary ny firazanana ara-pirazanana amin'ny androm-piainana iray hafa.
Ny ankamaroan'ny fifandonana sy ny ady dia mifototra amin'ny tsy fitovizan'ireo marika famantarana ny maha-izy azy ireo. Raha tsapantsika fa afaka miverina amin'ny vatana vaovao indray isika ho mpikambana ao amin'ny fahavalontsika, dia ho takatsika fa tsy misy antony tokony hanaovana ady.
Tranga mahazatra amin'ity lafiny ity dia ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao an'i Anne Frank | Barbro Karlen. Nenjehina sy novonoina ho Jiosy Alemanina i Anne nandritra ny fanafihan'ny Nazia an'i Netherlands. Raha fantatry ny Nazia fa afaka teraka jiosy ny olona iray ary ny iray kristiana amin'ny androm-piainana iray hafa dia tsy ho nitranga izany Holocaust izany.
Toy izany koa, raha takatsika fa afaka miharihary amin'ny kolontsaina ET isika ary ny mifamadika amin'izany dia ho azo sy ekena kokoa ny firahalain'ny olombelona sy ny ET. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana hafa any Barbro, ary koa ny fandinihana tranga hafa izay mampiseho ny fiovan'ny fitambarana sy ny zom-pirenena, azafady mankanesa any:
Ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao miaraka amin'ny fiovana amin'ny fivavahana, ny zom-pirenena ary ny fifandraisana ara-poko
Ny ET dia te-hifandray, na dia misalasala aza izy ireo noho ny tantaranay mahery setra
Raha mahatakatra ny olombelona sy ny ETs isika dia samy mivoatra amin'ny alàlan'ny dingan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray, dia efa manana fifanarahana be dia be isika!
Ny ET dia te-hifandray, saingy miahiahy momba ny fivoarantsika ara-panahy sy ny fironantsika hanao ady noho ny antony ara-pinoana sy ara-pirenena ary ara-poko.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka, hizaha ireo karazana ET isan-karazany mitsidika ny Tany, ary koa ny fikasan'izy ireo sy ny sambon-danitra.